Munyengetero wekukumbira kudzivirirwa
“Munyengetero wangu ngauite serusenzi” (2)
Kutsiura kwemunhu akarurama kwakaita semafuta (5)
Vakaipa vanowira mumambure avo (10)
Rwiyo rwaDhavhidhi. 141 Haiwa Jehovha, ndinodana kwamuri.+ Kurumidzai kuuya kuzondibatsira.+ Teererai pandinodana kwamuri.+ 2 Munyengetero wangu ngauite serusenzi+ yagadzirwa pamberi penyu,+Maoko angu akasimudzwa ngaave semupiro wezviyo* wemanheru.+ 3 Isai murindi pamuromo wangu, haiwa Jehovha,Isai murindi pasuo remiromo yangu.+ 4 Musarega mwoyo wangu uchirerekera kuzvinhu zvakaipa,+Kuti ndiite mabasa akaipa nevanhu vakaipa;Ngandirege kudya zvekudya zvavo zvinonaka. 5 Kana munhu akarurama akandirova, kunenge kuri kundiratidza mutsa;*+Kana akanditsiura, zvakafanana nemafuta mumusoro wangu,+Uye musoro wangu haumboarambi.+ Ndicharamba ndichinyengetera kunyange munguva yekutambudzika kwavo. 6 Kunyange vatongi vavo vakawisirwa pasi nepamawere,Vanhu vachateerera mashoko angu, nekuti anofadza. 7 Sezvinoita munhu paanorima achipunza-punza mavhinga,Ndiko kupararira kwaita mapfupa edu pamuromo weGuva.* 8 Asi maziso angu anotarisa kwamuri, haiwa Changamire Ishe Jehovha.+ Ndakapotera kwamuri. Musatora upenyu hwangu.* 9 Ndidzivirirei ndirege kubatwa nechiteyeso chavakanditeyera,Ndirege kubatwa nemisungo yevanoita zvakaipa. 10 Vakaipa vachawira pamwe chete mumambure avo,+Ini ndichipfuura pasina chinoitika kwandiri.
^ Kana kuti “weSheori.” Ona Tsanangudzo Yemashoko.
^ Kana kuti “Musadurura mweya wangu.”